Kaansartu waa cudur yimaada marka unugyada jidhku ay u tarmaan si aan xad lahayn. Marka kaansartu ka bilaabantu xiidnaha weyn (mindhicirka) ama malawadka, waxa loogu yeedhaa kaansarta mindhicirka iyo malawadka (colorectal cancer).
Kaansarta mindhicirka iyo malawadku waa sababta labaad ee keenta geerida ama u dhimashada kaansarta gudaha Maraykanka. Daaweyntu waxay si fiican u shaqeysaa marka hore loo ogaado kansarka mindhicirka-malawadka.
Khatarta kaaga imaan karta
Khatarka kaaga imaan karta inaad qaado kansarka mindhicirka iyo malawadka sare ayay u kacdaa marka ay da’daadu weynaato. Khatarta kaaga imaan karta sare ayay u kacdaa haddii aad leedahay:
cudurka caabuqa mindhicirka sida cudurka baraarka iyo caabuqa mindhicirka (Crohn’s) ama cudurka caabuuqa boogaha mindhicirka iyo malawadka (ulcerative colitis)
taariikh shaqsi ama qoys oo kansar ama burooyin ku yaala mindhicirka ama malawadka
cillad xaga hidde sidaha ah.
Waxa kale ee sare u qaadi kara khatarta aad ugu jirto kansarka mindhicirka iyo malawadka waa:
cabbitaanka 2 ama ka badan oo ah cabbitaan leh aalkolo maalin kastacunista hilibka warshadeysan (hilibka cuntada fudud, hilib doofaar, hilibka “hot dogs”)
cunista in ka badan 6 qaybood (isku-darka 18 wiqiyadood) oo ah hilib cas todobaad kasta. Halkii qayb cunis waa 3 wiqiyadood ama qiyaastii cabbir u dhigma hal xidhmo oo ah turub. Tusaalaaha hilibka cas waxa ka mid ah hilibka shiidan ee lo’da iyo doofaarka.
isticmaalidda tubaakada ama sigaarka.
La xidhiidh bixiyahaaga daryeelka caafimaadka ama dhakhtarkaaga haddii ad qabtid mid ka mid ah astaamahan:
saxarada sida ay tahay oo isbedesha
dhiigbax ku dhaca malawadka
saxaradaada oo dhiig leh
saxarada oo ka dhuuban sida caadiga ah
xanuun joogto ah marka la saxarooneyo
saxarada oo adag ama shuban soconaya in ka badan mudo bil ah
guud ahaaan xanuun yar oo caloosha ah (dibiro, buuxitaan, majiiris, xanuuno gaas)
dareen aynan saxaradu soo dhamaaneynin kuligeeda
culeyskaaga oo yaraada sabab la’aan.
Baadhitaanku wuxuu raadiyaa burooyin ama calaamadaha kansarka (sida dhiig ku jira saxaradaada) kaasoo aadan arki karin. Baadhitaanka joogtada ah wuu ku caawini karaa:
uga hortag kansarka adigoo helaya burooyinka mindhicirka ama calaamadaha kale ee kansarka
hel kansarka marxaladiisa hore marka ay sahlan tahay in la daweeyo.
Waxa ad gargaar ka geysan kartaa inad ka hortagtid kaansarta mindhicirka iyo malawadka.
Ha laguu sameeyo baadhitaano joogto ah.
Soo ogow in waalidkaa ama wallaalahaa ay qabeen burooyin.
Samee jimicsi joogto ah.
Baadhistu waxay bilaabataa da’da 45 sano. Wadajir, adiga iyo daryeel bixiyahaaga caafimaadka ayaa go’aaminaya baadhista kugu haboon. Baadhista ugu wanaagsan waa tan aad adigu sameyso.
Allina Health waxay ku talineysaa 3 baadhis:
mindhicir-fiirin (colonoscopy): Nidaamkaan waxaa lagu sameeyaa 10-kii sanaba mar rug caafimaad ama isbitaal. Dhakhtarku wuxuu isticmaalaa kaamero yar oo wadata nal si looga soo eego mindhicirkaaga burooyin ama kansar.
baadhis saxaro (FIT): Baadhistaan waxaa lagu sameeyaa hal mar sanadkiiba guriga. waxay ka raadisaa dhiig aan caadi aheyn sambalka saxaradaada. Waxaad sambalka u direysaa sheybaarka. Baadhistaan waxaa kaloo loo yaqaan iFOBT.
baadhis DNA saxarada (FIT-DNA): Baadhistaan waxaa lagu sameeyaa hal mar 3-dii sanaba guriga. waxay ka raadisaa DNA aan caadi aheyn oo kansar ama burooyin sambalka saxaradaadoo dhan. Waxaad sambalka u direysaa sheybaarka si loo baadho.
La hadal dhakhtarkaaga caafimaadka haddii aad u maleyneyso in kansarka mindhicirka iyo malawadka aad halis sare ugu jirto. Weydii marka aad bilaabeyso baadhista, baadhistee adiga kugu haboon iyo inta jeer aad is baadheyso.